XAGEE KU DAMBEEYEY BAARITAANKII DILKII ALMAAS ELMAN? - Awdinle Online
XAGEE KU DAMBEEYEY BAARITAANKII DILKII ALMAAS ELMAN?
February 24, 2020 (Awdinle Online) –Bishii Noofember sanadkii hore 2019, waxaa xareda Xalane ee magaalada Muqdisho oo ammaaankeeda aadka loo dilaaliyo lagu dhextoogtay Almaas Elman Cali Axmed oo ahayd gabar u ololaysa arimaha xaquuqul Insaanka.
Dowladda Federaalka Soomaaliaya iyo Taliska AMISOM waxay saaado kadib dilka Almaas Elman sheegeen in ay bilaabeen baaritaan ku aadan kiiskaas, wixii ka soo baxana la wadaagi doonaan ummadda Soomaaliyeed.
Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliya Gen. Cabdi Xasan Maxamed oo warbaahinta la hadlay dilka ka dib wuxuu sheegay in ciidanka Booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan laanta CID ay furtay gal-dacwadeed ay ka qeybgali doonaan saraakiil badan oo khibrad u leh baarista noocaan oo kale ah, isagoo intaas ku daray in wixii ka soo baxa kiiskaas ay la wadaagi doonaan ummadda Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadiisaba.
Sidoo kale war-saxafadeed xiligaas ka soo baxay Taliska ciidamada AMISOM waxaa lagu sheegay inay bilaabeen baaritaanno ku aadan dilka Almaas, ayna baarayaal u dirtay goobta lagu dilay gabadha isla markaasna ay wareysteen darawalkii baabuurka iyo dad goobjoogayaal ah.
AMISOM waxay sheegtay xiligaas in si wadajir ah ciidammada dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo ha’yadaha kale ay si buuxda uga shaqeyn doonaan baaritaanka ku aadan dilkii loo geystay Almaas Elman.
Hadabba, iyadoo laga joogo muddo ku dhow boqol maalmood, dilkii Almaas ayaa ilaa iyo uusan jiran war ah oo ka soo baxay dowladda Federaalka iyo Taliska AMISOM oo looga hadlay baaritaankii kiiskaas.
Ma ahan arrin ku sucub Soomaaliya, oo waxaa jira kiisas badan oo la sheegay in la baarayo, balse aan dib dambe leysku weydiin, basle kani wuxuu ahaa mid ka dhacay xarun ay deggan yihiin Safaaradaha iyo dibloomaasiyiinta reer Galbeedka oo amnigeeda aad loo ilaaliyo.
Almaas Elman, waxaa la dilay, 20-kii November, 2019
Almaas Elman ayey walaalo ahaayeen Ilwad Elman oo ah gabar u ololeysa nabadda, sanadkii horana ku jirtay dadkii loo sharaxay abaalmarinta Nabadda ee Noble Peace Price ee ku guuelystay Abiy Ahmed.
Qoyska Almaas ayaa ka shaqeynta arrimaha xuquuqda aadanaha iyo nabadda ka dhaxlay Aabahooda Elman Cali Axmed oo sanadkii 1996-dii isna lagu dilay magaalada Muqdisho.
Previous articleLaamaha amaanka Kenya oo xiray laba ruux Somali ah
Next articleAmbassador James Swan oo fariin Culus u Gudbiyay Farmaajo